Nutridieta: yako webhusaiti yezvikafu kuti uderedze huremu | Nutri Kudya | Kudya kweNutri
Nutridieta: yako webhusaiti yezvikafu kuti uderedze huremu
Nutridieta ndeye webhusaiti yakasarudzika mukudya kuti ikubatsire kurasikirwa nehuremu. Isu tinokuudza zvese nezve zvinonyanya kukosha zvekuwedzera zvekudya, pamwe nehunhu hwavo uye mabhenefiti ehutano hwako. Kana iwe uchida kuziva chikafu chinoshanda kwazvo kuti uderedze huremu, usapotsa zvinyorwa zvedu.
Kudya kunonyanya kushanda
Kana isu tikatanga kutarisa, kune zvikafu zvisingaperi izvo zvatinazvo. Asi kuNutridieta tinokuunzira zvakanakisa Kudya kuti uderedze huremu uye chengetedza huremu hwako. Mazano akareruka ekuisa mukuita, pasina kuziya nenzara uye nemazano akanakisa kuitira kuti ugare uchiremerwa.
Ndokusaka pane yedu webhusaiti iwe uchawana iyo kudya kwakakurumbira asi panguva imwe chete, iyo inoshanda uye yakachengeteka. Izvo chete zvinotivimbisa mhedzisiro uye izvo zvisingaise hutano hwedu panjodzi. Iwe uchaona kuti nechishuvo chidiki, iwe unowana iyo nzira yekubvisa ako akawedzera kilos, saka pano iwe unogara uri mumaoko akanaka. Sezvo iwe uchizowana menyu inokodzera yako mutinhimira wezuva nezuva uye zvine hutano, zvakapfuma uye zvakapusa chikafu kugadzirira.
Maitiro ekuchimbidza metabolism
Koriori mazana mana ekudya
1500 koriori chikafu
Iwe unoda here kuwana zvimwe zvekudya?
Ive neshuwa yekushanyira chikamu chedu chekudya kwaunowana icho chinonyatsokodzera zvaunoda.
Dzimwe nguva tinombozeza kana tichiudzwa nezvazvo Zvekudya zvinozadzisa kuonda. Asi kubva zvino zvichienda mberi, isu tichachinja pfungwa yedu nezvavo. Nekuti paNutridieta tinokuratidza kuti sei nezvimwe zvekudya zvekutanga uye zvimwe zvinowedzera iwe unogona kuwana mhedzisiro yawakagara uchida.
Dzimwe nguva isu tine zvekuwedzera zvekudya muruoko rwedu asi hatizive mashandisirwo azvo. Natural zvigadzirwa yaunogona kushandisa uine chivimbo chakazara kuti unzwe uye utaridzike zvirinani. Pawebhusaiti yedu unogona kuona ese mienzaniso uye tsananguro dzakajeka dzatinokuratidza nezvavo. Iwe uchabvisa kutya kwezvokuwedzera!
Isu tinokuudza iwe kuti chii edamame, ayo zvivakwa uye kuti inotorwa sei
Maitiro eprobiotic echisikigo
Iwe unoda here kuwana zvimwe zvinovaka muviri zvekuwedzera?
Muchikamu chedu chezvekudya unowana zvekudya zvakawanda zvine zvinhu zvinonakidza izvo zvinobatsira iwe kudzikisa huremu kana kugadzirisa hutano hwako. Unovaziva vese here?
Ona zvimwe zvekuwedzera zvinovaka muviri
Ongorora webhusaiti yedu
Pfeka a mararamiro ehutano zvinogoneka sekureba sekunge tine mamwe mazano akanaka kana nhungamiro kuti zvikwanisike. Neichi chikonzero, muNutridieta iwe unowana akateedzana ezvikamu zvakakwana, kuisa mukuita uchichengeta hutano hwako uye kudzora huremu hwako. Kune rimwe divi, unogona kunakirwa nezvikafu zvakachengeteka uye zvakaenzana zvinoenderana nemararamiro ako.
Ehezve, kune rumwe rutivi, pane yedu webhusaiti iwe unowana ese iwo ruzivo rwakakosha nezve chikafu izvo dzimwe nguva zviri patafura yedu, asi isu hatizive zvakakwana. Zvakanakira, mabhenefiti uye zvivakwa zvinofukidza yakawanda yeruzivo iyi. Navo, isu tinokubatsira iwe kugadzirira zvinonaka zvekubika, nekuti kudya zvine hutano hakufanirwe kuve kunofinha.
Isu tinotaurawo utano hwehutano pamwe nezvimwe zvirwere, kuti iwe ugone kuve neruzivo rwese rwakagadziridzwa uye kubvunza kusava nechokwadi uko kunombomuka mupfungwa dzedu. Ehezve, hatikanganwe maekisesaizi ane hutano, pamwe nemitambo yakakurudzirwa uye zvigadzirwa kana zvinowedzerwa izvo zvinopa muviri wako nezvazvinonyatsoda, nguva dzose zvine hwaro hwepanyama.
Pazasi iwe unowana rondedzero yezvikamu zvese zvatino tarisa mairi Nutridiet:
Dzazvino blog nhau
Usapotsa nhau dzazvino dzatakaburitsa pane yedu blog blog.
Iwe unoda here kuona edu achangoburwa zvinyorwa pane zvekudya?
Usapotsa zvinyorwa zvechangobva kuitika pane yedu blog blog